Baarlamaanka Kanada Oo U Codeeyey Mooshin Lagu Tageerayo Muslimiinta Shiinaha – Heemaal News Network
Baarlamaanka Canada ayaa u codeeyay in sida uu ula dhaqmo Shiinaha qowmiyadda Muslimiinta u badan ee Uighurs uu yahay “xasuuq” ka dhan ah bulshadaas.
Moshiinka ku saabsan tacaddiyada Shiinaha uu kula kaco Uighurs ayaa waxaa tageeray dhammaan xisbiyada mucaaradka iyo xildhibaanno ka tirsan xisbiga haya talada dalkaas.
Ra’iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo qaar badan oo kamid ah golahiisa wasiirada ayaa ka aamusay arrintani.
Canada ayaa noqonayaa dalkii labaad ee aqoonsado in xasuuq uu Shiinaha ku hayo dadka laga tiro badan yahay ee ka tirsan qowmiyadda Uighurs, Mareykanka ayaa horraan aqoonsaday dhibaatada lagu hayo dadkaas.
Xildhibaanada Canada ayaa sidoo kale ansixiyay qaraar dowladda looga codsanayo inay jeediso baaq caalami ah oo lagu dalbanayo in Shiinaha aanan lagu qaban ciyaaraha Olimbikada ee la qabto xilliyada qaboobaha sanadka 2022 waa haddii Shiinaha uu si wado xasuuqa.
Shiinaha ayaa ka jawaabaya tallaabadan, wuxuu cambaareeyay isla markaana ka hor yimid go’aanka kasoo baxay baarlamaanka Canada, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Ra’iisul Wasaare Trudeau ayaa ka fiirsanayaa in uu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan tallaabooyinka Shiinaha ee ka dhanka ah ah qowmiyadda laga tiro badan yahay ee ku nool gobolka Xinjiang gaar ahaan in lagu tilmaamo ‘Xasuuq’.
Wuxuu sheegay in loo baahan yahay baaritaano qoto dheer ka hor inta aanan la gaarin go’aan ka dhan ah Shiinaha.
Ka hor inta aysan codeynta dhicin, Erin O’Toole oo ah hoggaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in tallaabada looga golleeyahay in la diro farriin cad oo ku aadan in la xoojiyo xuquuqda aadanaha.
Mr O’Toole wuxuu sheegay in xayiraaddii dhawaan Shiinaha uu kusoo rogay BBC ay ka dambeysay warbixintii ay ka diyaarisay tacaddiyada iyo kufsiga laga geysto ‘xeryaha dhaqan celinta’ ee ku yaalla gobolka Xinjiang.
Xiriirka Canada iyo Shiinaha ayaa sii xumaanayay sanadihii lasoo dhaafay iyadoo go’aankan ugu dambeeyay uu xaaladda uga sii dari karo.
Safiirka Shiinaha u fadhiyo Canada Cong Peiwu ayaa warbaahinta Canada u sheegay in go’aanka kasoo baxay baarlamaanka uu yahay ‘mid faragelinayo arrimaha gudaha ee Shiinaha’
Wuxuu intaas ku daray in gebi ahaanba ay kasoo horjeedaan go’aankaas isla markaana wax xasuuq ah uusan ka dhicin gobolka Xinjiang.
Kooxaha u doodo xuquuqul insaanka ayaa sheegay in Shiinaha uu milyan qof oo ka tirsan qowmiyadda Uighurs uu ku hayo xeryo uu ku sheegay ‘kuwa dhaqan celinta’ oo ku yaalla gobolka Xinjiang.
Dukumeentiyo sir ah oo warbaahinta loo dusiyay sanadkii 2019 ayaa shaaca ka qaaday qaabka ay dowladda shiinaha u mareyso tashkiilinta boqolaal kun oo qof oo ah muslimiin ku xiran xeryo aad loo ilaaliyo, kuwaaso oo ay dooneyso in maskaxiyan ay afkaartooda badasho.
Dukumeentiyo rasmi ah oo ay nuqullo ka mid ah heshay BBC-da xilliggaas, gaar ahaanna barnaamijka baaritaannada Panorama, ayaa muujinayay in dadka xeryahaasi lagu hayo ee maxaabiista ahi si khasab ah looga dhaadhicinayo afkaar aysan raalli ka ahayn, ciqaabna ay halkaasi kula kulmaan.
Puntland Oo Shuurddo Aan Suurta Gal Ahayn Ku Xirtay Ka Qayb Galka Shirka
Maxkamada Sacuudiga Oo xukun Adag ku Riday Haweeney Xaquuqda Dumarka U Ololeysa.